Isu Tinodzokorora Zvemukati Zvakabudirira | Martech Zone
Muvhuro, September 28, 2015 Svondo, Gunyana 27, 2015 Douglas Karr
Ndakakokwa muhurukuro pamusoro Blab.im mavhiki mashoma apfuura iyo yaive hurukuro yakanaka kwazvo pa kudzokorora zvirimo. Isu tinoona makambani mazhinji achiramba achinetseka nekugadzira zvirimo - uye kudzoreredza zvemukati haisi nzira yehusimbe yekugovana zvirimo, inzira inonakidza yekugadzirisa yako yemukati zano.
ZveMartech, isu tinonyora pakati pe5 ne15 zvinyorwa pavhiki. Zvizhinji zvezvinhu zvakagadziriswa izvo zvatinowedzera ruvara uye tsananguro, zvakare. Iyi posvo muenzaniso wakanaka - iwo musoro we Maitiro Ekudzokorora Zvemukati ndiyo imwe yandaida kureva nezvayo, asi iyo infographic yakagadzirwa ne ExpressWriters kwakandikurudzira kuti ndipedze kutumira uye nekupa rairo yangu ndega.
Isu tinodzokororazve zvemukati nematatu matatu akapatsanuka:
Kuvandudza Zvemukati - Isu tinowanzo cherekedza kuti yechinyakare, yechinyakare, chinyorwa chinoramba chichitarisa kublog saka tinoenda kunotsvaga musoro wenyaya kwese, kugadzirisa mifananidzo, kuyedza kutsvaga vhidhiyo, uye kudzoreredza chinyorwa paiyo yakafanana URL senge nyowani . Nekuti icho chinyorwa chatova nesimba rekutsvaga, chinowanzoita zvirinani mumajini ekutsvaga. Uye nekuti chinyorwa ichi chakagovaniswa boka, zviratidzo zvekugovana pane edu mabhatani zvinotyaira zvakanyanya kugovana. Usarega kukuru kwemukati kufa!
Muchinjikwa Pakati - Iyi infographic inotaura zvakawanda kumukana wekupa iwo iwo musoro mumwechete kumasvikiro. Isu tinoita izvi futi, tichikurukura zvatinotumira pane yedu yekushambadzira podcast uye tichiita ekushambadzira mavhidhiyo. Isuwo pamwe chete tinovashandisa semapepa, ebook uye infographics nguva nenguva.
Kuchera Deeper - Isu takagadzira zano rakabudirira nevatengi vedu rekuvabatsira kuvaka chiremera nezviri mukati, kwete kungogadzira rukova rusingagumi rwayo. Musoro iwoyo wakasimuka uye isu takakumbirwa kuti tipe pairi, nyora pepa papepa pairi, uye takachera zvakadzama mukutsvaga musoro wenyaya. Dzimwe nguva unonyora chinyorwa chikuru uye mhinduro yacho "meh". Asi dzimwe nguva iwe unonyora chinyorwa uye wotora! Tora mukana wekuchera zvakadzika mune izvo zvinozivikanwa zvinyorwa - unogona kuzvidzorera se infographics, whitepapers, webinars uye mharidzo.
Iyo infographic inogovaniswa uye inoonekwa, paavhareji, Kakapetwa ka30 kupfuura blog blog - saka iwe unogona kuona kuti kutora chinyorwa chako uye kugadzira chinoonekwa kubva kwachiri kunogona kutyaira zvakanyanya kutarisisa kumusoro wenyaya. Expresswriters vanokurudzira kushandura zvinyorwa zvako kuita mharidzo, magwara, zvirimo zvegirinhi, infographics, podcast uye mavhidhiyo.
Tags: kugadzirwa kwemukatitsvakiridzo yezvirimomuchinjikwa svikirovanyorisei kutimaitiro ekudzokororazve zvemukatiinfographicrepurpose zvemukatikumutsidzira zvemukati